उप निर्वाचनः लिम्बुवानबाट को को उम्मेदवार ? - Sainokhabar
होमपेज / राजनीति / उप निर्वाचनः लिम्बुवानबाट को को उम्मेदवार ?
उप निर्वाचनः लिम्बुवानबाट को को उम्मेदवार ?
पान्थर । उप निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा पान्थर जिल्लामा सरगर्मी बढेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चले पनि उम्मेदवार तय गरिसकेको छ ।
जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिका र फिदिम १ र हिलिहाङ ७ मा उप निर्वाचन हुदैछ । १४ मंसिर हुने निर्वाचनमा हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा धनबहादुर थाम्सुहाङ वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दैछन् । थाम्सुहाङलाई नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)का गेहनाथ रिजाल, नेपाली काग्रेसका तिलबिक्रम इधिङ्गो, समाजवादी पाटीका भवानी योङ्या लगायतसँग स्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।
याम नेम्बाङ पनि वडा अध्यक्षमा उठ्दैछन् । उनी फेदेन नगरपालिका वडा नम्बर १ को अध्यक्षमा उठ्ने भएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा )का गजाधर भट्टराई, नेपाली काग्रेसका शुभराज थापा, राप्रपाका निलम गिरी र समाजबादी पाटीका गौरब लामासँग नेम्बाङ चुनाबी मैदान होमिएका छन् ।
दुई वटा वडाहरुमा मात्र होइन लिम्बुवान मञ्चकोे फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिने तयारी थालेको छ । जितेन चेम्जोङलाई पाटीबाट टिकट प्रदान गरेपछि मञ्चले अभियानलाई तीब्रता दिएको छ । उम्मेदवार चेम्जोङलाई नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) बाट बीरबहादुर कुरुम्बाङ, नेपाली काग्रेसबाट सचिव बृजहाङ आङदेम्ब, समाजबादी पाटीबाट बिमला आङदेम्बे नेम्बाङ र राप्रपाबाट सुजन चेम्जोङ (सुमन)ले टक्कर दिदैछ । लिम्बुवान विश्वविद्यालय सुरुवात गर्न सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन समानुपातिक, सहमतीय र सहअस्तित्व अनुसार गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने भन्दै फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार जितेन चेम्जोङले भोट मागेका छन् । चेम्जोङ मञ्चका जिल्ला उपाध्यक्ष समेत हुन् ।